बेस्सरी पसिना चुहाउनुका सात फाइदा थाहा पाउनुस – Rapti Khabar
गर्मीमा त सबैजना तरतरी पसिना चुहाउँछन् नै र अत्यधिक पसिना चुहाउनु स्वास्थ्यका लागि लाभदायी नै हुन्छ ।
यसले शरीरमा जम्मा भएका विषाक्त पदार्थलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ र अनेकथरी रोगबाट बचाउँछ । व्यायाम गर्दा निस्कने पसिनाले झन् शरीरलाई धेरै फाइदा गर्छ । पसिना धेरै निस्कँदा हुने फाइदा निम्न बमोजिम छन् :
१ छाला सफा
पसिना निस्केपछि शरीरको फोहोर बाहिर निस्कन्छ । छालाको रोम छिद्र खुलेर छाला सफा हुन्छ ।
२ चम्किलो छाला
अधिक मात्रामा पसिना निस्कँदा मृत छाला झर्छ र त्वचामा प्राकृतिक निखार आउँछ ।
३ तौल घटाउन
व्यायाम गर्दा जति धेरै पसिना निस्कन्छ, शरीरबाट त्यति धेरै क्यालोरी डढ्छ । यसो हुँदा शरीरको तौल घटाउन सहज हुन्छ ।
४ पत्थरी हटाउन
शरीरबाट अत्यधिक पसिना निस्कँदा व्यक्तिले पानी धेरै पिउँछ । यसले गर्दा शरीरको फोहोर सफा हुन्छ । मिर्गौलामा पत्थरी भएका मानिसलाई पसिना बगाउनुका धेरै फाइदा छन् ।
अधिक पसिना निस्कँदा शरीरको तापमान सन्तुलित रहन्छ । यसकारण दिमाग फ्रेश हुन्छ र तनाव हट्छ ।
पसिना निस्कँदा शरीरमा रक्तसञ्चार तेज हुन्छ जसका कारण पूरा शरीर स्वस्थ हुन जान्छ ।
शरीरको फोहोर पसिनामार्फत निस्कने भएकाले अनुहारमा डण्डीफोर आउँदैन वा एकदमै कम हुन्छ ।
४० कटेसी रमाउन यी कुरामा ध्यान दिनुस्, नत्र…
उमेर बढ्दै जाँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या पनि बढ्छन् ।
अझ ४० वर्ष कटेपछि त रक्तचाप, मधुमेह, जोर्नीको दुखाइ, पाचन क्रियामा गडबडी, टाउको दुख्ने, कमजोरी र अन्य रोगहरू आइलाग्छन् । सबैलाई यो समस्याले सताउने भएपनि महिलालाई यसले धेरै दुःख दिन्छ । यसरी गर्नुस् आफ्नो स्याहार :
चिकित्सकलाई देखाउनु अत्यन्त जरूरी हुन्छ तर धेरै मानिस यसप्रति ध्यानै दिँदैनन् । चालीस कटेपछि नियमित चेकअप गराउनुस् । यसो गर्दा शारीरिक कमजोरी छिट्टै थाहा पाइन्छ र सही समयमा उपचार हुन्छ ।
यो उमेरमा आफ्नै इच्छाअनुसार व्यायाम शुरु नगर्नुस् । चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम व्यायाम गर्नुस् ।
बिहान भ्रमण गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायी हुन्छ । दिनदिनै कम्तीमा २० मिनेट भ्रमण गर्नुस् । यसो गर्दा रोगहरू निको हुन्छन् । अलिअलि गर्दै भ्रमणको समय बढाउँदै जानुस् ।
खानपानमा ध्यान दिनुस् । सन्तुलित भोजन गर्नुस् । चिल्लो र जंक फूड नखानुस् । ***तलको भिडियो हेर्नुस***
दिनमा आठ घन्टा अवश्य सुत्नुस् । निद्रा पूरा नहुँदा स्वास्थ्यलाई हानि पुग्छ ।
धेरै मानिस यो उमेरमा मानसिक तनावको शिकार हुन्छन् । यसबाट बच्न मेडिटेसन गर्नुस् । योग र ध्यानले स्वास्थ्य राम्रो बनाउँछ ।
हेयर कन्डिसनरको रुपमा प्रयोगः ***तलको भिडियो हेर्नुस***
क्यान्सरबाट बचाउः***तलको भिडियो हेर्नुस***
नीम अनेकौं रोगको एउटै औषधी, के केमा लाभदायी ?***तलको भिडियो हेर्नुस***
नीममा रहेका गुणहरूले अनेकौं रोगको उपचार काम गर्छन्। यसका औषधीय गुणका कारण आयुर्वेदमा यसको प्रयोग हजारौं वर्षदेखि हुँदै आइरहेको छ। नीमलाई संस्कृतमा अरिष्ट भनिन्छ जसको अर्थ लाग्छ श्रेष्ठ, पूर्ण र कहिल्यै खराब नहुने।
नीमका डाँठ, जरा, बोक्रा र फल सबैमा शक्ति वर्द्धक तत्व विद्यमान हुन्छन् अनि रोगविरुद्ध लड्छन्। यसको बोक्रा विशेषगरी औलो र छालासम्बन्धी रोग निको पार्नका लागि उपयोगी हुन्छन्।
नीममा मधुमेह, क्यान्सर, मुटुरोग, एलर्जी लगायतका कैयौं रोगसँग लड्ने क्षमता हुन्छ । आयुर्वेदमा यसलाई रोगनिवारक मानिएको छ ।***तलको भिडियो हेर्नुस***
शरीरमा करोडौं ब्याक्टेरिया हुन्छन् । तीमध्ये धेरैजसो ब्याक्टेरिया हानिकारक हुन्छन् । ती हानिकारक ब्याक्टेरिया मार्नका लागि नुहाउनुअघि शरीरमा नीमको लेप लगाउनुस् र शरीरमै सुक्न दिनुस् । त्यसपछि पानीले मजाले धुनुस् । तपाईंको शरीरका सारा ब्याक्टेरिया नष्ट हुन्छन् । यसको विकल्पमा नीमका केही पात पानीमा राखेर रातभरि छोडिदिनुस् अनि बिहान उठेर त्यो पानीले शरीर नुहाउनुस् ।
नीमले तपाईंको शरीर प्रणालीलाई सफा राख्छ । यसले गर्मी पैदा गर्छ र शरीरमा तीव्र एवं प्रचण्ड ऊर्जा उत्पन्न गराउँछ ।​
मानसिक तनावकाे प्रभावकारी औषधि नै सामाजिक सम्पर्क- अध्ययन***तलको भिडियो हेर्नुस***
मानसिक तनावमा परेका व्यक्तिका लागि सामाजिक सम्पर्क अत्यन्त प्रभावकारी औषधि हुने एक अध्ययनले देखाएको छ।
अध्ययनकर्ताहरुले तनाव न्यूनीकरणका लागि सामाजिक सम्पर्कलाई बढाउनुपर्ने सुझावहरु उपयोगी हुने बताएका छन्। अध्ययनकर्ताहरुको टोलीले बनाएको प्रतिवेदन अमेरिकी जर्ननल अफ साईक्याष्ट्रीमा प्रकाशित भएको थियो।
‘मानसिक तनाव संसारभरी ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ, अपाङ्गताको मुख्य कारणको रुपमा मानसिक समस्या रहेको छ, तर यसको निवारणको प्रभावकारी उपाय अहिलेसम्म कसैले पत्ता लगाउन सकेको छैन,’ अध्ययनमा संलग्न कर्मेल चोइ (पिएचडी) ले भने। तनाब बढाउन सामाजिक अन्तरक्रिया, सञ्चार माध्यमको प्रयोग, सुत्ने तालिका, पोषण, शारीरिक गतिविधि र वातावरणीय अवस्था लगायतको भूमिकाका बारेमा पनि उनीहरुले अध्ययन गरेका थिए।***तलको भिडियो हेर्नुस***
अहिले सामाजिक दूरी बढाउनुपर्ने परिस्थीति सिर्जना भएका बेला यसतर्फ थप ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन्। तनाव व्यवस्थापन र सामाजिक सम्पर्कको विषय अहिलेको अवस्थामा अझ बढी सान्दर्भिक र चासोको विषय भएको छ, एक अध्ययनकर्ताले भने। एक्लै एक्लै बस्ने मानिसहरु मानसिक तनावको बढी जोखिममा रहने पनि अध्ययनले देखाएको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन्।
जाडोमा गाजर खान खुबै मज्जा हुन्छ । दिनदिनै काँचो गाँजर खाँदा वा त्यसको जुस पिउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी अनेकौं समस्या समाधान हुन्छ । औषधीय गुणहरूले भरिएको गाजरले जाडोमा फाइदा पनि गर्छ । दिनदिनै गाजर खानुका यस्ता फाइदा हुन्छन् :***तलको भिडियो हेर्नुस***
एक सय पचास ग्राम गाजर, तीन लसुन र ल्वाङको अचार बनाएर दिनदिनै बिहान खाँदा पुरानो रुघाखोकी समेत निको हुन्छ ।***तलको भिडियो हेर्नुस***
के हो ह्याङओभर ? कसरी पाउने यसबाट छुटकारा ?***तलको भिडियो हेर्नुस***
ह्याङओभर हुँदा कागती, नून र चिनी मिसाएर पिउनुस् अनि बेस्सरी पानी पिउनुस् ।***तलको भिडियो हेर्नुस***
नरिवलपानी पिउँदा पनि ह्याङओभर हट्छ ।***तलको भिडियो हेर्नुस***